सेल डेमा ८० प्रतिशतसम्म छुट... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सेल डेमा ८० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ–दराज
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, कार्तिक २१
एकै दिनमा सबैभन्दा बढी अनलाईन कारोबार गर्ने कम्पनीको विश्व किर्तिमान अलिबाबासँग छ। अलिबाबाले गत वर्ष सेप्टेम्बर ११ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कारोबार गरेको थियो।
एक दिनको सेल डेमा अलिबाबाले ३०.८ विलियन अमेरिकी डलरको व्यापार गरेको थियो। विश्वभरी फैलिरहेको जाइन्ट इकमर्स अलिबाबाले सन् २०१८को अप्रिलमा दराजको स्वमित्व लिएपछि नेपालमा पनि औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको थियो।
त्यसपछि अलिबाबाले ११ वर्षअघि सुरु गरेको एक दिनको सेल डे गत वर्षदेखि नेपालमा पनि मनाउन थालियो। त्यसलाई निरन्तरता दिदैं यो वर्ष पनि दराजले आउँदो सोमबार हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो एक दिनको सेल डे मनाउँदै छ।
यो दिन किन मनाईन्छ? यसको महत्व के छ त? भन्ने विषयमा सेतोपाटीले दराजका चिफ अपरेसन अफिसर विमल अर्यालसँग गरेको कुराकानी :–
दराजकासँगै ११ः११ को पनि चर्चा निकै छ, यो भनेको के हो ?
हो, हामी पछिल्लो केही समयदेखि यसैको तयारीमा लागि रहेका छौं । ११ः११ लाई यसकै टर्मबाटै बुझ्न सकिन्छ । हामीले प्रचार गरेको व्यानरमा पनि लेखेका छौं, एक दिनको ‘सेल डे’। अंग्रेजी ११औं महिना अथवा नोभेम्बर ११ मा मनाउने भएरनै ११ः११ भनिएको हो।
गत वर्षदेखि दराजको स्वामित्व अलिबाबाले लिएपछि हामीले पनि सबैभन्दा ठुलो सेल डेको रुपमा मनाउन थालेका हौं।
यसको तयारीलाई चार भागमा बाँडेका छौं।
पहिलो तयारी नेर्टवर्कको हो।
ग्राहकले विषशगरी त्यो दिन देशैभरीबाट अर्डर गर्नुहुन्छ। माग पूरा गर्न हामीले विभिन्न क्षेत्रमा बाँडेर सेवा दिनेछौं।
अहिले ६ वटा लजिस्टीक सेवा दिने कम्पनीसँग सहकार्य गरेका छौं। देशको काकडभिट्टादेखि धनगढिसम्म सामान पुयाउनेगरी नेर्टवर्क विस्तार गरिएको छ।
दोस्रो, हामीले पूर्वाधारमा सुधारेका छौं। १७ वटा हव बनिसकेको छ भने १४ वटा कलेक्सन पोइन्ट छ। त्यस्तै, १० हजार वर्ग फिटको साेटिङ सेन्टर तयार गरिसकेका छौं।
१५ हजार स्क्वायर फिटको वेयर हाउस बनिसकेको छ, जहाँ विक्रेताले आफ्नो सामान राख्न सक्नुहुन्छ।
तेस्रो तयारी ‘ह्युमन रिसोर्स’ हो।
त्यस दिनको लागि ४ सयभन्दा बढी राइडर डेलिभरी गर्न तयार छन्। अर्डर समयमै ग्राहकको घरमा पुर्याउन यस्तो तयार गरिएको हो।
चौथो तयारी प्रविधिको हो। जसमा विभिन्न बैंकसँग सहकार्य गरेर कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा बढाएका छौं।
गत वर्ष त समान पुर्याउन समस्या भएको ग्राहकको गुनासो थियो नि?
यो कुरा आंशिक सत्य मात्रै हो। अझै त्यो हाम्रो पहिलो क्याम्पेन थियो। केही कमजोरी भए होला। तर, यो वर्ष सकेसम्म त्यस्तो समस्या दोहोरिन नदिने तयारी गरेका छौं।
गतवर्ष एकैपटक ठूलो अर्डर आउँदा व्यवस्थापनमा थोरै समस्या भयो। यो वर्ष चारपक्षको सुधार र तयारी राम्रो बनाएको छौं। त्यसैले, यो वर्षको सेल डे सफल हुनेमा विश्वस्त छौं।
कस्तो अपेक्षा छ ११ः११ बाट?
हामीले जेजति गर्छौ भनेको छौं त्यो काम गर्छौं। तयारी राम्रो गरेका छौं, त्यसैले यो क्याम्पिएन राम्रो हुन्छ। ग्राहकले अर्डर गर्दा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने क्यालकुलेसन गरेरै तयारी गरेका हौं।
प्रविधिको प्रायोग गरेर हरेक कामको निरीक्षण गर्छौं। जहाँ विग्रिएको छ तुरुन्तै पत्ता लगाएर समाधान गरिन्छ। यसकारण राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।
नेपालमा यसको कस्तो होला कारोबार?
पछिल्लो वर्षको ट्रेन्ड हेर्दा इकमर्समा मानिसको आर्कषण निकै बढेको छ। नेपालमै पनि पछिल्लो समय अर्डरहरु निकै बढेको छ। हामीले १ लाखभन्दा बढी अर्डरको अपेक्षा गरेका छौं। दराजका बिक्रेताले ठूलो मात्रामा छुट घोषणा गर्नुभएको छ। ८० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुनेछ। कारोबार उत्कृष्ट हुने विश्वास छ।
त्यो दिन सामान सस्तो पाइन्छ?
दराजका विक्रेताले ठूलो मात्रामा छुटको घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले एउटा सामानमा ८० प्रतिशतसम्मको छुट दिने भनिएको छ।
सेल डेको मात्रै नभएर इकमर्सको सामान अन्य पसलमा भन्दा सस्तो हुन्छ। किनभने सामान लिन जाँदा लाग्ने खर्चसहति समय पनि जोगिन्छ। समय भनेको पैसा हो भन्ने बुझपर्यो नि।
यो सुविधा कुन–कुन ठाउँमा छ?
काकडभिट्टादेखि धरान, इटहरी, विराटनगर, विरगन्ज, काठमाडौ हुँदै पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत र दाङलगायतका विभिन्न २६ सहरमा यो सुविधा प्रदान गरिएको छ।
कस्तो सामान धेरै खोजिँदोरहेछ त अनलाईनमा ?
पछिल्लो समय दराजले उपलब्ध सामानको ‘भेराइटी’ बढाइरहेको छ। सबैको आफ्नै–आफ्नै रोजाइ हुन्छ। दराजमा भएका विक्रेताबाट इलेक्ट्रोनिक आइटमदेखि, ग्लोसरी, फेसन तथा बाइकसम्म पाउन सकिन्छ। त्यसैले प्राय सबै सामानमा आर्कषण देखिन्छ।
स्थानीय उत्पादनलाई अनलाइनबाट बेच्न कति सजिलो छ?
निकै सजिलो छ। हामीले स्थानीय वा विदेशी उत्पादन भनेर छुट्याएका छैनौं। कुनै पनि सामानमा विभेद छैन। नेपालमा पाइने जुनसुकै सामानको विक्रेता बनेर बेच्न सकिन्छ। तर, स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिनेमा हामी पहलकदमी गर्नेछौं।
इकमर्समा मानिसको चासो कतिको छ?
चार वर्ष अघिदेखि नेपालमा दराजले इकमर्स सुरु गरेको छ। तीन वर्ष अघि मैले काम सुरु गर्दा कामदार ३० जना मात्रै थिए। हाल काम गर्नेको संख्या ३ सयभन्दा बढी पुगिसकेको छ। त्यस समयमा सामान हेरेर, छामेर, नापेर मात्रै किन्ने चलन थियो।
अहिले विस्तारै ‘इकमर्स’ प्रयोग बढ्न थालेको छ। मानिससँग समय पनि कम छ। त्योसँगै इन्टरनेटको विकास विस्तार हुँदै गएको छ। यीनै कारण तीन वर्षयता इकमर्सको धेरै विकास भइसकेको छ।
‘टच एन्ड फिल’पछि मात्रै सामान किन्ने समाज विस्तारै इकमर्समा सिफ्ट हुँदै छ। हाम्रो अर्डर पनि बढेको छ, यसले पनि इकमर्समा ग्राहकको आर्कषण बढेको देखिन्छ।
घरैबाट सामान कसरी लिने, फाइदा के छ?
इकमर्समा समयको कुनै बन्देज छैन। जस्तैः पसल बन्द हुने, चाहेको सामान नपाउने। यहाँ धेरै कम्पनीका उत्पादनहरु छन्। यसकारण आफूलाई मन लाग्दा जस्तो सामान पनि किन्न सकिन्छ। यो नै एउटा सुन्दर पक्ष हो।
अनलाइनमार्फत् सामानको विश्वास कसरी गर्ने?
आफ्नो सामानमा विश्वास दिलाउनु सक्नु नै ठूला कुरा हो। हामीले एकपटक दराजबाट सामान किनेको मानिसलाई फर्केर फेरी आउने बनाउन सक्यौं भने त्यसले नै विश्वासको वातावरण बनाउँदै जान्छ। अर्को भनेको नीतिबाट विश्वास दिलाउनु हो। यदी किनेको सामान बिग्रिएको छ भने, त्यसलाई ‘फ्रि रिटर्न’ गर्न सकिन्छ।
हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टर विकास गरेका छौं। जसले ग्राहकले पाउने सामान ठिक थियो/थिएन मूल्याकंन गर्छ। ग्राहकको सुझावअनुसार पनि सुधार गरिन्छ। विश्वास दिलाउन दराज युनिभर्सिटी पनि बनाएका छौं। दराजको एपबाट पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ।
इकमर्सको लागि दराज नै किन छान्ने ?
इकमर्समा धेरै कुराहरु छन्। दराजलाई हामी एउटा ‘इको–सिस्टम’ भन्छौं। किनकी हामी बाजरकाआधारमा काम गर्छौ। हजारौ विक्रेताले दराजमार्फत हजारौ सामान बेच्नुहुन्छ। त्यो भन्दा धेरै हाम्रो ग्राहक पनि छन्।
ग्राहकलाई चाहिने कपडादेखि बाइकसम्म पाइन्छ। ‘रेन्ज अफ प्रोडक्ट’ धेरै छन्। अझै यहाँ ग्राहकको मूल्याङ्कनकै आधारमा विक्रेताको मूल्याङकन हुन्छ। भनेकै समयमा सामान विक्री गर्न एउटा सिस्टम छ। यस्तै विविधताले दराज इकमर्सको लागि उत्तम रोजाई हो।
सामान फिर्ता गर्न मिल्छ?
सजिलैसँग फिर्ता हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेकै सेवा दिनु हो। यदी ग्राहकले खोजे जस्तो सामान भएन भने हाम्रो फ्रि रिर्टन पोलिसी उपलब्ध छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ११ वटा हव छ। प्रत्येक हवमा रहेका कर्मचारीमार्फत् यो सेवा दिइन्छ।
इकमर्सको लागि इबैंकिङ कति महत्वपुर्ण छ?
अधिकांश देशमा यो प्रक्रिया विकास भइसकेको छ। तर, नेपालमा विस्तारै विकास हुँदै छ। इकमर्समा इबैंकिङ उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। हाल अनलाइनबाट अर्डर गर्ने र पैसा बैंकमा निकाल्नुपर्दा ग्राहक झन्झट मान्छन्।
त्यसैले गत अप्रिलबाट नेपालका अधिकांश बैंकको कार्डबाट पेमेन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं। यससँगै क्यास दिएर पनि कारोबार गर्न सकिन्छ।
इकमर्सको भविष्य कस्तो छ ?
हाम्रो केही वर्षको इतिहास पल्टाउँदा थाहा हुन्छ। कहाँबाट सुरु गरेर कहाँ आइपुग्यौं। अनलाईनमा हुने कारोबारमा अहिले निकै सुधार भइरहेको छ। परम्परागत रुपमा सामान किन्दा समयको सीमितता छ। ग्राहकले आफ्नो क्षेत्रमा नपाएका सामान पनि किन्नसक्ने भए।
यससँगै मूल्य तुलना गरेर सामान छनौट गर्न सकियो। मानिसहरु प्रविधिसँग सकारात्मक हुँदै गएकाले इकमर्सको भविष्य राम्रो देखिन्छ।
अन्त्यमा, सेलडेका बारेमा केही भन्नु छ?
यो महान मेला हो। ग्राहकलाई ८० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ। हजारौ विक्रेताले मेलामा भाग लिएका छन्। त्यसैले धेरै सामान पनि पाउन सकिन्छ। यससँगै अर्डर समयमा नै डेलिभर गर्न सक्छौं भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कात्तिक २१, २०७६, १२:२२:००